विपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा कोभिड वार्ड सञ्चालन • Health News Nepal
चितवन, २२ वैशाख २०७८
भरतपुरस्थीत वीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा कोभिड वार्ड सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
क्यान्सरको उपचार गर्न आउने बिरामी र काम गर्ने चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना भाइरस सङ्क्रमण देखिएमा राख्न मिल्ने गरी वार्ड सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. देजकुमार गौतमका अनुसार हाललाई १५ शय्या तयार गरिएको छ । सोही ठाउँमा विस्तार गरेर २० शय्यासम्म पुर्याउन सकिने छ ।
देशैभरिबाट क्यान्सरका बिरामी आउने र उनीहरुमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको उच्च जोखिम रहने हुँदा वार्ड तयार गरिएको उनले बताए । अस्पताल आउने बिरामी र कुरुवालाई अनिवार्य पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था अस्पततालले गरेको छ ।
अस्पतालका सूचना अधिकारी गृहि नारायण महतोले कामको सिलसिलामा चिकित्सक कर्मचारीलाई सङ्क्रमण भए पनि सोही वार्डमा राखेर उपचार गर्ने व्यवस्थाा गरिएको बताए ।
अस्पतालमा हाल कार्यरत २१ स्वास्थ्यकर्मी सहित कर्मचारीलाई सङ्क्रमण देखिएको छ । उनीहरु अधिकांश होमआइसोलेशनमा रहेका छन् । यससँगै जिल्लाको सरकारी भरतपुर अस्पताल र दुई मेडिकल कलेजमा सङ्क्रमितको उपचार हुँदै आएको छ ।
Tags: #Chitwan#Health and population ministryBP koieralaCorona Virus #Covid19Covid AwardDental HealthDr. Dej Kumar gautam
Pingback: अस्पतालमा बेड नपाए के गर्ने ? - डा. रवीन्द्र पाण्डे • Health News Nepal
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरी माथि आक्रमण #MedicalEducationCommision